SaveMyanmar Archives - CeleHits
ခလေးတွေ ငိုတာ အဘိုးမမြင်ချင်ပါဘူးဆိုတဲ့ KNU/KNLA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် စောဘောကျော်ဟဲ
May 9, 2021 by CeleHits
တခါက၁၁ လ သားအရွယ် ကလေးတဦးဟာ သူ့လက်ထဲကဘောပင်ကို ဆွဲယူလိုက်ပါတယ်… အနီးမှာရှိတဲ့ ခလေးအမေက ဒါကိုမြင်တော့ ဖိုးမူရေ(သမီးရေ)… ပြန်ပေးလိုက်နော်… ခလေးဆိုတာ လူကြီးကို မရှုပ်ရဘူးလို့ ပြောပါတယ်… ဒါနဲ့ပဲ ဖိုးမူလေးဟာ တဝါးဝါးနဲ့ကို ငိုပါလေရော… ဒါနဲ့သူက ခလေးရယ် မငိုပါနဲ့နော် ခလေးတွေငိုတာ အဘိုးမမြင်ချင်ပါဘူး ဒီဘောပင်ကို ခလေးအပိုင်ယူလိုက်ပါ… အဘိုးလက်ဆောင် ပေးပါတယ်တဲ့ အင်မတန်ကိုမှ စိတ်ဓာတ်ကောင်း နလုံးသားလှတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း သူက ဖာပွန်နယ်၊ တောင်ပေါ်က သဒါဒဲ ကျေးရွှာသား… အဖူး စောဘောကျော်ဟဲ Crd# အရမ်းလေးစားရတဲ့ အဖူးစောဘောကျော်ဟဲ ဘုရားရှင်ကောင်းကြီး အမြဲသက်ရောက်ပါစေ🙏🙏🙏 Saw Phoe Khwar# Unicode တခါက၁၁ လ သားအရယြ် ကေလးတဦးဟာ သူ့လက္ထဲကေဘာပင္ကို ဆြဲယူလိုက္ပါတယ်… အနီးမွာရွိတဲ့ … Read more
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ရဟတ်ယာဉ်ကို KIAက ဘာလက်နက်နဲ့ ပစ်ချလိုက်သလဲ
May 3, 2021 by CeleHits
ရန်ကုန်၊ မေ ၃ မေလ ၃ ရက်​နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲအချိန် မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ကုန်းလောရွာအနီးတွငွ KIA က ပစ်ခတ်၍ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျပြီး လေယာဉ်ပေါ်ပါသူ သုံးဦး သေဆုံးသွားသည်။ ပျက်ကျခဲ့သည့် ရဟတ်ယာဉ်မှာ Mi-35P အမျိုးအစား တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပြီး ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် K.I.A က 12.7mm ကျည်ဆန်သုံး Type 85 AA အမျိုးအစား Heavy Machine Gun ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ DSA အပတ်စဉ် ၄၆ ဆင်း အရာရှိ​ဟောင်းတစ်ဦးက ၄င်း၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားထားသည်။ KIAမှ ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူက KIA မှ စစ်​ကောင်စီ ရဟတ်ယာဉ်ကိုပစ်ချလိုက်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း … Read more
မြန်မာစစ်​ခေါင်းဆောင်တွေ ငှားရမ်းလိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကိုလော်ဘီလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော်ပွဲစားလူလိမ် ကြီး Ari Ben-Menashe အကြောင်း…
March 8, 2021 by CeleHits
ကမ္ဘာ့စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကိုလော်ဘီလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော်ပွဲစားလူလိမ် ကြီး Ari Ben-Menasheကို မြန်မာစစ်​ခေါင်းဆောင်တွေ ငှားရမ်းလိုက်တယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းကကနဦးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေက အကျိုးဆောင်အဖြစ် သူနဲ့သူ့ကုမ္ပဏီကို ငှားရမ်းထားကြောင်း ကနေဒါနိုင်ငံ Dickens & Madson ကုမ္ပဏီက အစ္စရေး- ကနေဒါနိုင်ငံသားက မနေ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာပါ။ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ နိုင်ငံရေးကနေ စွန့်ခွါလိုသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ တရုတ် လွမ်းမိုးမှုကနေ ဖယ်ခွါပြီး အမေရိကန်နဲ့ ပိုမိုနည်းစပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်လူတွေဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ ငှားရမ်းထားတဲ့ အစ္စရေးကေနေဒါ လော်ဘီကနေ ပြောပါတယ်… အစ္စရေးရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ဖြစ်တဲ့ Ari Ben-Menashe က အခုလိုမျိုးပြောခဲ့တာပါ… သူဟာ အရင်တုန်းက ဇင်ဘာဘွေ အာဏာရှင် ရောဘတ်မူဂါဘီနဲ့ ဆူဒန် စစ်အုပ်ချုပ်မှုအတွက် လော်ဘီလုပ်ခဲ့သူပါ… မြန်မာလက်ရှိ အာဏာသိမ်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ နေရပ်စွန့်ခွါသွားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေ အပေါ်မှာလည်း … Read more
ကေအမ်မ်ယူ နယ်မြေတွင် ရောက်ရှိနေ သည့် CDM ဝင်လိုက် သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ ၏ ပြောပြချက်များ (ရုပ်သံ)
ကေအမ်မ်ယူ နယ်မြေတွင် ရောက်ရှိနေသည့် CDM ဝင်လိုက်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ ၏ ပြောပြချက်များ (ရုပ်သံ) ကေအမ်မ်ယူ နယ်မြေတွင် ရောက်ရှိနေသည့် CDM ဝင်လိုက်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ ၏ ပြောပြချက်များ (ရုပ်သံ) Zawgyi ကေအမ္မ်ယူ နယ်ျေမတြင် ရောက်ရွိနေသည့် CDM ဝင္လိုက်သည့် ရဲတပ္ဖြဲ့မ်ား ၏ျေပျာပခ်က္မ်ား (ရုပ်သံ) Credit.
မုံရွာမြို့မှာ မြန်မာဘီယာနဲ့ ခြေဆေးခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း
March 7, 2021 by CeleHits
မုံရွာမြို့မှာ မြန်မာဘီယာနဲ့ ခြေဆေးခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း မြန်မာဘီယာဖြင့် ခြေထောက်ဆေးခြင်းကမ်ပိန်းကို မုံရွာဒေသခံအချို့ ဗန္ဓုလလမ်းတွင် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃နာရီခန့်က ပြုလုပ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ “တပ်နဲ့ဆက်နွယ်လို့ပါ၊ မသောက်ဖူး ၊ခြေဆေးပစ်တာ၊ဆိုင်ကလည်း လက်ကျန်ဖြတ်တာ၊မရောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ “ဟု ပါဝင်သူတစ်ဦးကပြောသည်။ကမ်ပိန်းတွင် လမ်းသွားလမ်းလာများ မည်သူမဆို ပါဝင်ဆေးကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး ဝင်ရောက်ဆေးသူများရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်နေ့ အာဏာစသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်း စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ပြည်သူများက သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်သည်။ယခုအချိန်တွင် စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို စုစည်းထားသော ဝေးဝေးနေ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းလဲ ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ဈေးဝယ်ခါနီးတိုင်း ဝေးဝေးနေ အပလီကေးရှင်းတွင် စစ်ဆေးပြီးမှ ဝယ်ရင် တိုက်တွန်းထားကြသည်။ Unicode မုံရှာမွို့မှာ မွနျမာဘီယာနဲ့ ခွဆေေးခဲ့ကွတဲ့ အကွောငျးအရငျး မွနျမာဘီယာဖွငျ့ ခွထေောကျဆေးခွငျးကမျပိနျးကို … Read more
နိုင်ငံတကာတပ်တွေ လာဘို့တောင်မလိုတော့ဘဲ အဘက်ဘက်က ကျရှုံးနေတဲ့ အာဏာရူးများ
အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာ March လကုန်မှာ လုံးဝကျဆုံးသွားမယ်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေက ရေးသားထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၁။ Media ကျဆုံးသွားခြင်း။ သူတို့ရဲ့ အာဘော်နဲ့ သတင်းအချက်အလက် စီးဆင်းမှုဟာ အလုံးစုံနီးပါးရပ်တန့်သွားပါတယ်။ နိုင်ငံခြား Mediaမပြောနဲ့ social media ကနေတောင် ထုတ်ပြန်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။ ပြောချင်တာက လူတစ်ယောက် “အ” သွားသလိုပါပဲ။ ၂။ Order in disarray အမိန့်ထုတ်ပြန်သမျှ သက်ရောက်မှု မရှိတော့ပါဘူး။Order in disarray က အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ရတဲ့ အချက်ပါ ။သူတို့ အတွက် နေပြည်တော်က ထိုင်နေတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုပဲ ရောက်တော့မယ် အချိန်ပါ။ ဘာလို့ပြည်သူလက်မခံလဲဆိုတာကိုလည်း တွေးခေါ်ဖြေ‌ရှင်းနိုင်စွမ်း မရှိ‌သလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ ၃။ Installation failed state။ အုပ်ချုပ်မူ့စနစ်ကို မတည်ဆောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ရပ်ကွက်ရုံးတွေပြည်သူကအဖွင့်မခံပါဘူး။ Basic … Read more
ဒေါက်တာဆာဆာ နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စိတ်အားထက်သန်ပုံနဲ့ လုပ်ဆောင်နေပုံတော်တော်တူတယ်
ဒေါက်တာဆာဆာ နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စိတ်အားထက်သန်ပုံနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ Patterns လေးတွေ နည်းနည်းလေးကနေ တော်တော်လေးကို ဆင်နေတာတွေကို တွေ့လာရတယ်။ . ဒေါက်တာဆာဆာ့ဆီမှာ သူများခိုင်းလို့ လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးထက် .. မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား .. သူ့စကားထဲ .. ၅၄ သန်းသော မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ ဆိုတဲ့ .. တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဟာ ခဏခဏတွေ့နေတဲ့ အဖြစ် နဲ့ ပြည်သူချစ်စိတ် တမျိုးသားလုံးအတွက်ဆိုတဲ့ဟာက ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း။ သူဟာ ချင်းလူမျိုးပေမယ့် သူ့တိုင်းရင်းသားအတွက် လုပ်နေတာ မဟုတ်ဖူး။ တနိုင်ငံလုံး စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကနေ လွတ်မြှောက်အောင် .. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို စိတ်နဲ့ လုပ်နေတာ။ ယနေ့ မအလတို့ သူတို့ တဦးတယောက် ကောင်းစားရေးမျိုး လူနည်းစုကောင်းစားရေးမျိုး မဟုတ်ဖူး။ နောက် သူဟာ … Read more